Electronics – Tagged "Projectors" – ICT.com.mm
Noah Cosmic (Smart 1080p) Projector (White)K701,000
Noah Aura (Smart 720p) Projector (White)K401,000
Cheerlux C50 (Smart 1080p) ProjectorK470,000
Cheerlux C9 (Smart 720p) ProjectorK324,000
ViewSonic PA503S Projector (DLP) SeriesK830,465
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Noah Model: Cosmic (Smart 1080p) Resolution: 1920 x 1080 Brightness: 7200 Lumens Screen Size: 40-300 Inch Lamp Life: 30,000 hours Contrast: 5000:1 Operating System: Android 9.0...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Noah Model: Aura (Smart 720p) Resolution: 1280 x 720 Brightness: 4000 Lumens Screen Size: 30-150 Inch Lamp Life: 30,000 hours Contrast: 2000:1 Operating System: Android 9.0...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Cheerlux Model: C50 (Smart 1080p) Resolution: 1920 x 1080 Brightness: 3800 Lumens Screen Size: 30-150 Inch Lamp Life: 50,000 hours Contrast: 2500:1 Operating System: Android 9.0...
Cheerlux C9 (Smart 720p) Projector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Cheerlux Model: C9 (Smart 720p) Resolution: 1280 x 720 Brightness: 2800 Lumens Screen Size: 30-150 Inch Lamp Life: 50,000 hours Contrast: 2000:1 Operating System: Android 6.0...
ViewSonic PA503S Projector (DLP) Series
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Lumens: 3500 ANSI Resolution: 800 x600 DCR: 22000:1 Lamp hours :5000 /15000 Super Eco mode Throw Distance :3.9-43ft/ 1.9-13.11m Input :...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Noah Model: Mini (Smart 720p) Resolution: 4200 Lumens Screen Size: 30-150 Inch Lamp Life: 30,000 hours Contrast: 2000:1 Operating System: Android 8.0 Wireless: Miracast / WIFI...
ViewSonic LASER Series Projector LS600W
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Lumens:3000 ANSI Lumens Resolution : 1920 x 1080 DCR : 3,000,000:1 Contrast Ratio Lamp hours: 30000 hours ( Normal ) Throw...
ViewSonic Projector (DLP) Series PA503XP
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Lumens : 3600 ANSI Resolution : 1024 x768 (V) DCR: 22000:1 (DynamicEco Mode) Lamp hours :5000 /15000 Super Eco mode Throw...
Acer S1386WHN Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Panel: DLP®3D Ready Colour: White Resolution: WXGA (1,280 x 800) Maximum WUXGA (1,920x1,200) Aspect Ratio: 16:10 (Native), 4:3/16:9 (Supported) Contrast Ratio: Dynamic Black 20,000:1 Brightness: 3,600...
Epson EF-100B Laser Home Projector (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: EF-100B Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter LCD Panel: 0.59 inch with C2 Fine High Definition: HD ready Aspect Ratio: 16:10 Contrast Ratio: 2,500,000...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: EF-100W Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter LCD Panel: 0.59 inch with C2 Fine High Definition: HD ready Aspect Ratio: 16:10 Contrast Ratio: 2,500,000...
Epson EB-2255U Business Projector (5000 lumens)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Up to 300-inch display & great quality: Full HD resolution with Epson's 3LCD technology Bring presentations to life: Outstanding 5,000-lumen brightness Extensive connectivity options: Including screen mirroring...
Epson EB-FH52 Business Projector (4000 Lumens)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless Full HD bright images, supports lightning fast 240Hz refresh rate: 3LCD technology and equally high white and colour light output Contrast ratio of 16,000:1: Deep, rich...
Epson EB-W06 Business Projector (3700 Lumens)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Create the big screen experience: From box sets to business presentations, capture everyone's attention Bright even with ambient light: Equally high White and Colour Light Output of...
BenQ LH720 Laser Projector 1080P (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ BlueCore Laser Technology Resolution: Full HD - 1920 x 1080 dpi Lumen: 4000 Projection Size: 30” x 300” Contrast: 100,000 : 1 Lamp Life: 20,000 hours (normal)...
BenQ EX600 Smart Wifi Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Resolution: 1024 x 768 dpi Lumen: 3600 Projection Size: 60” x 180” Contrast: 20,000 : 1 Lamp Life: Normal 5000 hrs, Smart Eco 10000 hrs, LampSave 15000 Zoom...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Laser Projector, Lumens: 5000 ANSI Lumens, Resolution: 1920 x 1080, DCR: 100,000:1 Contrast Ratio, Lamp Hours: 20000/30000 hours (Normal/Eco), Throw Distance:...
ViewSonic PS600W Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Short Throw WXGA Projector, Lumens(ANSI): 3500 ANSI, Resolution: 1280 x 800, DCR: 22000:1 Contrast Ratio, Lamp Hours: 5000/15000 (Dynamic Eco mode),...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Viewsonic MP100 Wireless Presenter Lumens: 3600 ANSI, Resolution: 1280 x 800, DCR: 22000:1, Lamp hours: 5000/15000 Super Eco mode, Throw Distance: 3.3-36ft/1-11m, Input: HDMI, VGA...
VIVItek Qumi Z1H Pocket LED Projector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Native Resolution: 720p (1280×720) Brightness: 300 ANSI Lumens Contrast Ratio: 10000:1 Max. Supported Resolution: 1080p (1920 × 1080) @60GHz Native Aspect Ratio: 16:9 Lamp Life and Type:...
VIVItek Qumi Z1V Pocket LED Projector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Native Resolution: 480p (854 x 480) Brightness: 250 ANSI Lumens Contrast Ratio: 10000:1 Max. Supported Resolution: 1080p (1920 × 1080) @60GHz Native Aspect Ratio: 16:9 Lamp Life...
Epson EB-535W Business projector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Exceptional image quality: Epson’s 3LCD technology displays brighter images and more accurate colours Equally high white and colour light output: Projected image can be seen clearly even...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Up to 100-inch display and outstanding quality: HD-ready WXGA resolution with Epson 3LCD technology Finger-touch and dual pen: Use your fingers to annotate directly onto the screen...
Epson EB-2042 Business Projector (4400 lumens)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ White and Colour Brightness at 4,400lm XGA Resolution 12,000 hours lamp life in eco-mode MHL-enabled Multi-PC Projection Horizontal Keystone Slider Product dimensions: 309‎ x 293 x 105...